Ny rafitra fakan-tsarimihetsika vaovao an'ny B & H dia maka sary an-tsary | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Ny rafitra fakan-tsarimihetsika vaovao an'ny B & H dia maka sary an-tsary
Ny rafitra fakan-tsarimihetsika vaovao an'ny B & H dia maka sary an-tsary
Ny sary tsotra iray dia afaka miteny betsaka, ary ny fakana an'io sary io dia lakilen'ny serasera ilain'ny famoronana hamoronana ary hitombo ny mpihaino. Izay matihanina miasa ao amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo dia mahatakatra fa ny sary ao ambadiky ny atiny video dia afaka miteny vaovao marobe amin'ireo mpanatrika kendreny. Ary miaraka amin'ny B & H ny Rafitra fakana sary feno vaovao, ny matihanina mandeha dia tsy hanahirana amin'ny fahazoana ny sain'ireo mpihaino azy.
Momba ny B&H
B & H (Blimie & Herman) dia mpivarotra am-barotra amerikana sy sary mihetsika. Niorina voalohany tamin'ny 1973 ny orinasa, ary mitantana orinasa amin'ny alàlan'ny varotra mpanjifa e-varotra an-tserasera, varotra hatramin'ny varotra orinasa, ary ny toerana fivarotana iray any Manhattan, New York. B & H miasa toy ny mpamatsy fitaovam-pamokarana haino aman-jery vita amin'ny marika sy vokatra mifandraika. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana amin'ny fizarana Studio sy B2B azy, ny mpivarotra dia afaka manome ny mpanjifa ny fidirana amin'ny haitao avo lenta sy ny manam-pahaizana manokana amin'ny tsenan'ny famoronana votoaty. Ary ny tsenan'asa mandroborobo amin'ny votoaty toy ny indostrian'ny fahitalavitra dia hahazo tombony bebe kokoa amin'ny famoahana ny rafitra fakan-tsary feno indrindra, ny Sony PXW-FX9 XDCAM 6K.
B & H ny Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Rafitra feno fakan-tsary feno
Ny sary feno Sony FX9 manolotra ny mpampiasa fahafaha-misambotra haitao / sary tsy manam-paharoa & fanaraha-maso bebe kokoa sy fahaiza-manao fandraketana miaraka amin'ny kinova 2.0 an'ny firmware FX9 na firmware VENICE. Tsy maninona na ny mpampiasa dia mitifitra horonantsary fanadihadiana, hetsika, fahitalavitra misy, fanabeazana na famokarana orinasa. Ankoatry ny Sony ny PXW-FX9 XDCAM 6K Rafitra feno fakan-tsary feno rafitra fakantsary fakan-tsary azo ovaina 4K azo ovaina sy azo ovaina, izy io koa dia manana fakan-tsarimihetsika feno 6k Exmor R CMOS. Ity sensor ity dia ahafahan'ny mpampiasa misambotra sary 4K amin'ny halalin'ny saha sinematika, ary ny E-mount an'ny PXW-FX9 dia namboarina tamin'ny vy tsy misy fangarony ary ahafahan'ny mpanjifa mampiasa solomaso E-mount.
The PXW-FX9 fampidirana sy famoahana output dia 12G-SDI sy HDMI famoahana ho an'ny 4K, famoahana 3G-SDI ho an'ny HD, ary ny genlock sy timecode rehefa mampiasa setup multicamera. Ny rafitry ny autofocus Fast Hybrid AF dia mamela ny fifantohana marina ary mamela ny fahitana ny tarehy hamantatra ho azy ny endrik'olombelona miaraka amin'ny teboka 561 hita. The PXW-FX9 dia mety hahatratra ny fampiorenana ny sary mandroso amin'ny alàlan'ny gyroscope anatiny ho an'ny tifitra tena malama dia ho toy ny hoe gimbal no nampiasaina. Ny fandraisam-peo audio 4-fakan-tsary an'ny fakan-tsary dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa mikrôfona ivelany sy handraketana feo manodidina miaraka amin'ireo mika anatiny miaraka.
Sony's PXW-FX9 manasongadina amboaram-peo 15 isan-taona ary mirakitra 10-bit 4: 2: 2 mankany amin'ny efamira carte de media XQD dual izay manohana ny fanoratana miaraka sy miverina, ary koa ny maoderina firaketana fanamafisana izay mampiasa ny rakitra proxy. Ny rafitra fakantsary dia afaka mirakitra ny UHD (3840 x 2160) sy HD (1920 x 1080) ao anaty anatiny amin'ny tahan'ny voafantina avy amin'ny 1 fps ka hatramin'ny 60 fps ao amin'ny XAVC-I, XAVC-Long, ary MPEG HD endrika. Ary amin'ny fanavaozana firmware ho avy, tsy ho sahirana firaketana ny fakan-tsary HD amin'ny alàlan'ny 180 fps ary mamoaka rakitra 16K / 4K voajanahary 2K / 120K hatramin'ny XNUMX fps.
Ho fanampin'ny halaviran'ny fakantsary miompana amin'ny fakan-tsary, ny lokony manatsara ny endriny sy ny hazavana dia misy ISO base roa amin'ny 800/4000, ary manampy azy indrindra izany rehefa miatrika toe-jiro maivana na mampiasa solomaso miadana kokoa. Ny sivana 7 mijanona amin'ny elektronika dia afaka manatanteraka amin'ny maody automatique na manual, manitsy tsara ny 1/4 ka hatramin'ny 1/128 density. The PXW-FX9 Ny fakantsary ihany koa dia manana lokon'ny loko S-Cinetone, izay manome endrika malefaka sy mazava toa azy Sonyfakantsary VENICE.
The PXW-FX9 dia misy kiraro Multi-Interface (MI) mitambatra ary miaraka amina bateria B-U35, famandrihana bateria BC-U1A, adapter AC miaraka amina tariby roa, body cap, viewfinder, eyepiece, fanaraha-maso lavitra ary USB tariby. Ity fakantsary ity dia mifanentana amin'ny singa fanitarana XDCA-FX9 misy misaraka, ary manome izany ho an'ny fanohanana ny sorok'orinasa ML, endrika an-tamba-jotra, ary slot iray ho an'ny mpandray an-tserasera tsy miankina finday.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Rafitra feno sary mihetsikadia tsidiho ny www.bhphotovideo.com/c/product/1506002-REG/sony_pxw_fx9v_pxw_fx9_xdcam_6k_full_frame.html/overview.
Inona no azon'ny B&H atao ho an'ny fampielezam-peo
Miaraka amin'ny fidiran'ny PXW-FX9, ny mpamoaka gazety dia mahazo tombony betsaka amin'ny vokatra ao B & H ny tsipika fanoratana. Ny vokatra maro amin'ireto dia misy Rode PodMic Dynamic Podcasting mikrofonaly, izay kalitaon'ny fampielezam-peo, mikrô mikatroka mavitrika ho an'ny podcasting. Manana feo manankarena sy mandanjalanja izy, miaraka amin'ny sivana pop anatiny sy ny fahatairana anaty izay mampihena ny fihozarany.
Ny fotoana fanampiny ho an'ny fampielezam-peo dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fampiasana ny orinasa HP 15.6 ″ ZBook 15 G6 Mobile Workstation, izay HP ZBook 15 G6 & HP ZBook 17 G6 manaraka. Ireo no solosaina finday tonga lafatra ho an'ny mpamorona, mpanova horonantsary ary mpamorona VR izay mila fampisehoana amin'ny birao, ary manome fahalalahana ho an'ny mpampiasa izy ireo amin'ny sehatra rehetra.
B & H nanana lova lava izay naharitra nandritra ny dimy taona. Tamin'izany fotoana izany dia voaporofon'ny tenany ho mpivarotra fitaovana amin'ny horonantsary tena izy, ary nahomby tamin'ny fahafahany manome mozika, mpaka sary, ary karazana haino aman-jery hafa amin'ny famolavolana fitaovana tsara indrindra amin'ny indostrian'ny fahitalavitra izay afaka manitatra bebe kokoa amin'ny . Vokatra toy ny PXW-FX9 na ny Rode PodMic Dynamic Podcasting mikrofonaly ny tendron'ny iceberg fotsiny.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny B&H dia tsidiho www.bhphotovideo.com/.
B & H Fizarana B2B fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina mpandefa Rafitra fakana sary feno Firafitra FX9 Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Fitaovana famokarana media Multi-Interface podcasting SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Telo sy zana-tsipìka Ultra HD Forum Firafitra VENICE lahatsary Video injeniera virtoaly zava-misy 2020-05-15
Previous: Mivezivezy eran-tany: Fampitomboana ny rindrambaiko mikoriana miaraka amin'ny fahatarana haingam-pandeha, scale kokoa, ary TCO ambany kokoa
Next: Fahalavoana 2020 Faktiora Adjunct, fahitalavitra ary famokarana horonantsary